zvinyorwa-zvevanhu-vane-kuverenga-matambudziko | Zvazvino Zvinyorwa
12 mamirioni vanhu muSpain vane matambudziko ekuverenga.
Mupepeti Kuverenga Zvese anosvika kuSpain aine book collection yakatsaurirwa ku vanhu vane matambudziko ekuverenga uye kunyora.
Kuverenga nekunyora kunonzwika senge-kusafunga kwatiri, chimwe chinhu chatinotora sekurerutsa. Chokwadi ndechekuti vanhu vanopfuura mamirioni gumi nemaviri muSpain vane matambudziko ekuverenga nekunyora muhupenyu hwako hwezuva nezuva.
1 Imwe data pamusoro pekuwana mabhuku muSpain:
2 Nzira yekuunza mabhuku padyo nevanhu vane matambudziko ekuverenga?
3 Chinangwa chechirongwa ichi:
Imwe data pamusoro pekuwana mabhuku muSpain:
Zvinoenderana nedhata kubva muna2017, vangangoita gumi nevaviri muzana yevagari muSpain haaverenge kazhinji nekuda kwe matambudziko ekuona, matambudziko ekuverenga, kana mamwe matambudziko ehutano.
Tsika zvichiri zvakadaro muzviitiko zvakawanda Kunze kwezera yemapoka anotambura zvakanyanya: vanhu vane hurema hwepfungwa, vanhu vane kudzidziswa kushoma, vanhu vakuru, vanhu vari mamiriro ezvinhu engozi yekuregererwa, Etc.
Kuoma kuverenga hakusi nyaya yezororo chete, asi zvinokanganisawo vanhu ava mumabasa avo ezuva nezuva.
Kuunza mabhuku padyo nevanhu vane matambudziko ekuverenga zvinoreva kuziva zvinodiwa nedambudziko rega rega uye nekumisikidza nhanho dzakasiyana dzekugadzirisa.
Nzira yekuunza mabhuku padyo nevanhu vane matambudziko ekuverenga?
Iyo Kuverenga Kune Yese imba yekutsikisa ndeye nyanzvi mumabhuku emitauro yakajeka.
Haisi chirongwa chitsva, chakatoitwa munyika dzakaita seNetherlands, Germany neUnited Kingdom. Kuverengera Vese inomutsa a kuunganidzwa nematanho akasiyana akaitirwa chero munhu ane hurema hwekuverenga, zvisinei nezera ravo, zvavanofarira kana ruzivo rweSpanish.
Izvi zvakasiyana zvinopindura kudiwa kwe putsa runyararo kuti vanhu vane matambudziko ekuverenga vese vanochekwa kubva panzira imwechete.
Imwe neimwe ichada yakawanda kana shoma mifananidzo, dudziro yemazwi.
Ivo havadi kukanganwa nezve vanhu vane dyslexia kana matambudziko ekudzidza izvo zvinowanikwa mune limbo pakati pemabhuku akareruka uye akaomesesa mabhuku kune yako nhanho.
Chinangwa chechirongwa ichi:
Mumashoko emukuru wemuparidzi, Ralf Beekveldt.
"Zvakaoma mukuverenga zvinogona zvakare kukonzera matambudziko mukutsvaga basa rakakodzera, uye mukuzadzisa zvisungo zvemagariro uye zveveruzhinji. Iva nematambudziko kuti unzwisise tsamba yemasipareti, masimba emitero, mabhiri emagetsi zvichingodaro. Vanhu vanofarira iyo kuverenga, dzimwe nguva kekutanga mune yavo lives, uye semhedzisiro ivo vanotanga kuverenga zvakawedzera".
Iye zvino anouya kuSpain akamirira kuunza kuverenga padhuze nevanhu vese vaidavira kuti chaive chisiri chinhu chavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Zvinyorwa » Zvinyorwa zvevanhu vakaremara, hurema hwekudzidza kana matambudziko nekuverenga.
Kutaurirana naIngel García Roldán, munyori uye munyori wezvinyorwa zveEl viaje de Carol